လောကမှာ အအောင်မြင်ဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် လောကမှာကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ မထင်မိပါစေနဲ့။ လူတိုင်းမှာ ပြဿနာကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေသူတွေက မကောင်းတဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် သိထားသင့်တဲ့အချက် (၃) ချက်
သင်တို့ ချစ်ဖူးကြပါသလား။ ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ဖြစ်ဖူးကြပါသလား။ နောက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အမြင်တွေကို ဂရုစိုက်ဖူးပါသလား။ ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီး » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, News, RelationshipsLeaveaComment on သင် အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်ဖူးပါသလား
လူတိုင်းက ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိပ်မသိကြပါဘူး။ဘေးလူတွေကသာ ကိုယ်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ ပိုပြီးမြင်တတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ခန့်မှန်းနိုင်အောင် ကိုယ်အလှဆင်ချင်တဲ့ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ပုံစံကိုရွေးချယ်ကြည့်လိုက်ပါ။သင့်ကိုယ်သင်မသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်မျိုးမျိုးကို ပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။ *ပထမဆုံးပုံကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on သင်ရွေးလိုက်တဲ့ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်က သင့်အကြောင်းဘာပြောလဲ?
စာလေ့လာနေတုန်း ချောကလက်စားတာဟာ သင့်အတွက် ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေဖြစ်စေ…
ချောကလက်ကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ပါပဲ။စာလေ့လာရင်း ကိုယ်ကြိုက်တာလေးလည်းစားလို့ရသလို ချောကလက်စားတဲ့အခါမှာလည်း ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေရလာဦးမှာပါ။ကဲ ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေလဲ မြန်မြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ဥိးနော်*စိတ်ပျော်ရွှင်စေ ချောကလက်စားရင် လူက » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on စာလေ့လာနေတုန်း ချောကလက်စားတာဟာ သင့်အတွက် ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေဖြစ်စေ…
ကိုယ့်အသိအကျွမ်းထဲက စကားအရမ်းများတဲ့လူနဲ့ လမ်းမှာဆုံမိပြီး စကားပြောဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော့်ကိုမလွယ်တာပါပဲ။စကားအရှိန်ကလည်းတက် ကိုယ်ကလည်း အပြင်သွားရမှာ အချိန်ကမရှိဆိုရင် ဘယ်လိုစကားစဖြတ်ရမလဲဆိုပြီး စဉ်းစားမိတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on စကားအရမ်းများတဲ့သူနဲ့ မတော်တဆလမ်းမှာဆုံတဲ့အခါ ဘယ်လိုစကားမြန်မြန်ဖြတ်ကြမလဲ?
ဘာမှထွေထွေထူးထူးမဟုတ်ပဲနဲ့ကို ရုတ်တရက်ကြီးဝမ်းနည်းသွားတာ၊အားငယ်သွားတာ၊ငိုမိသွားတာ၊စိတ်ဓာတ်ကျသွားတာ၊အားလုံးက အေးဆေးဖြစ်နေပါရက်နဲ့ စိတ်ထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းပဲဖြစ်နေသလို၊တစ်ယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောလိုက်ရရင်ကို အားရှိသွားသလို ခံစားနေရတာမျိုး တစ်ချို့သူတွေဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန် သူတို့နဲ့စကားပြောပေးတဲ့သူ၊သူတို့ကိုဂရုစိုက်ပေးတဲ့သူကို ပိုပြီးအားကိုးချစ်ခင်တွယ်တာတတ်ပါသေးတယ်။ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့။ကျွန်တေ်ာတို့ရဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on ရုတ်တရက်ကြီးဝမ်းနည်းအားငယ်လာတဲ့စိတ်ကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ကြမလဲ?
လေယာဉ်စီးမယ်ဆိုရင် ဘယ်အချက်တွေကိုသတိထားဖို့လိုလဲ?ဘယ်အချက်တွေကိုမလုပ်သင့်ဘူးလဲ? *နှာစေးနေတာကိုဂရုမစိုက်ခြင်း နှာစေးနေတဲ့အခါမှာပေါ့ပေါ့ဆဆမနေပါနဲ့။နှာစေးတာဟာ သင့်ရဲ့နားကိုပိုပြီးဖိအားများစေပြီး သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်စေပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လေယာဉ်နဲ့ခရီးထွက်ခါနီးနေမကောင်းဖြစ်နေရင် ဆရာဝန်မြန်မြန်ပြပြီးသင့်တော်တဲ့ဆေးရည်ကိုယူသွားသင့်ပါတယ်။ *တစ်ချိန်လုံးထိုင်နေခြင်း လေယာဉ်စီးတဲ့အချိန်မှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ သွေးလည်ပတ်မှုနှေးကွေးပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလှုပ်ရှားမှုမှမရှိတဲ့အခါသွေးခဲတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on လေယာဉ်စီးတဲ့အခါ သတိထားသင့်တဲ့အချက်တွေ…
ရိုက်ကွင်းမှာတင် ရုတ်တရက်မေ့လဲပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Godfrey Gao
Posted on November 27, 2019 by Wint
ထိုင်ဝမ် – ကနေဒါလူမျိုး အသက် (၃၅)နှစ် Godfrey Gao ဟာ စူပါမော်ဒယ် ၊ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on ရိုက်ကွင်းမှာတင် ရုတ်တရက်မေ့လဲပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Godfrey Gao
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ အစားအစာတွေ၊ဆေးဝါးတွေနဲ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဖြည့်တင်းရသလို အခုပြောပြမယ့်နည်းလမ်းကောင်းကလည်း သင့်ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဘာနည်းလမ်းများလဲ? စိတ်ကလေးကျန်းမာအောင် အထောက်အကူပြုပေးတဲ့နည်းလမ်းကတော့ ခန္ဓာကိုယ်အနှိပ်နယ်ခံခြင်းပါပဲ။တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ၊နှစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on သင့်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုက ဘာများလဲ?